Home Wararka Kulan ay si wadajir ah u soo qaban-qaabiyeen Dowlada Itoobiya iyo Somaliland...
Kulan ay si wadajir ah u soo qaban-qaabiyeen Dowlada Itoobiya iyo Somaliland oo lagu qabtay Dubai (Sawiro)
Waxaa lagu qabtay magalaada Dubeey ee dalka Imaaraadka Carabata kulan ay si wadajir ah ay u soo qabanqaabiyeen dowlada Itoobiya iyo Dowlada Somaliand, Kulanka ayaa waxaa maalgalisay gadaalna ka taageereysay Dowlada Imaaraadka Carabta.
Kulan oo loogu magac daray daminta colaadaha u dhaxeeya dadka Soomaalida iyo Qoomiyadda Oromada ayaa waxa taladeeda lahaa Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axamad. Inta uu shirku socday waxaa looga hadlay xaalada siyaasadeed iyo tan bulsho u dhaxeeysa labadada Dowladood ee Itoobiya iyo Somaliland. Sidoo kale waxa laga hadlay sidii loo kobcin lahaa iskaashiga dhaqaale ee ka dhaxeeya labada Umadood.
Waa markii ugu horeeysay ee kulan noocaan ah lagu qabto dalka Imaaraadka Carabta oo iyagu aan iinta badan ogolaynin in dalkiida lagu qabto kulan siyaasadeed. Talaabadan ayaa qayb ka ah dagaalka siyaasadeed ee arimaha dibadda ee ku socda Dowlada Soomaaliya oo dagaal aan laga fiirsan ku qaaday beesha caalaamka iyo wadamada taageera Soomaaliya. Waxaan shaki ku jira in ay ka sii dari dono dribla uga imaan doono Soomaaliya dibbada hadii aan mal degdeg ah loo helin qar iska tuurka Farmaajo.